Qingzhou Hanyang Greenhouse Project Co., Ltd nezvechinhu kubva Qingzhou Xianke Mechanical mudziyo Co., Ltd kuti zvinodiwa pokumuka zvigadzirwa. Qingzhou Xianke Mechanical mudziyo Co., Ltd hwagadzwa muna 2010, uye yave vakazvipira akagadzira, kutsvakurudza uye kugadzira kwakaita girinihausi engineering sand mining machinery.After makore akawanda kukura, nyanzvi kugadzirwa uye kuvakwa, muna 2016 boka redu inotangwa chikamu boka Qingzhou Hanyang Greenhouse Project Co., Ltd, Hanyang kurima unyanzvi ari girinihausi design, kugadzira, kuvaka, kurima uye pashure-sale basa.
The kambani ndokwenguva nzvimbo dzinopfuura 15000 mativi metres, uye kugadzirwa workshop nezvokuvandudzika-zvikamu zviviri kubva muzvitatu munharaunda yose. The gadzira workshop iri vakapakata zvivako kwakakwana uye chemahofisi yakachena uye yakarongedzwa. Zvino kambani akagadza kugadzirwa dhipatimendi, vashandi dhipatimendi, okutengesa dhipatimendi, R & D dhipatimendi, magadzirirwo dhipatimendi, Dhipatimendi nezvimwe madhipatimendi. Office vashandi kwenguva refu kugadzikana panguva kumativi 20 vanhu, 15 zvekushandisa mainjiniya, vashandi fekitari vari yakatsiga kwenguva refu muna vanhu vanopfuura 50, kuvakwa vashandi 108 vanhu, ruzhinji vari unyanzvi hwokugadzira vashandi kuti vaiita bhizimisi ichi kwemakore akawanda .
Pashure pemakore akawanda kushanda uye tsvakurudzo, tinoshandisa chigadzirwa unhu zvakaisvonaka uye pashure-okutengesa basa kuhwina vatengi uye kumisa mudanga mudzimba uye kumisika. Saka kure, zvigadzirwa yedu vakatengesa vanopfuura 30 enyika, makanzuru, uye zvionera kumatunhu, uye zvinobudirira aivigirwa kuRussia, India, South Africa, Vietnam, Bangladesh, Singapore, Nigeria, Kenya, Togo, Congo nedzimwe nyika uye kumatunhu. Takagamuchira yakafarikana kurumbidzwa uye yakasimbiswa kwenguva pamwe ukama mudzimba uye mhiri kwemakungwa vatengi.
The yakanakisisa zvigadzirwa, hwakanakisisa basa, kuti lowset mutengo, HanYang munowedzera girl kuchivanze wako, ticharamba tichifara pabasa iwe, munogamuchirwa kubvunza.